ချင်းပြည်နယ်အတွင်း ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ် ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု အကဲဖြတ် တိုင်းတာ - Khonumthung Media Group
You are at:Home»Khonumthung»ချင်းပြည်နယ်အတွင်း ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ် ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု အကဲဖြတ် တိုင်းတာ
By admin on	 August 13, 2014 Khonumthung
၂၀၁၃ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဧပြီလ အထိ ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု မြေပြင်ကွင်းဆင်းတိုင်းတာခြင်း လုပ်ငန်းများ ကို ချင်းပြည်နယ် အပါအ၀င် ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်များတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများ အန္တရာယ်တားဆီး ကာကွယ်ရေး ဗဟို အဖွဲ့ နှင့် တရုတ် အမျိုးသား မူးယစ်ဆေးဝါး ထိန်းချုပ်ရေးကော်မရှင်တို့ပူးပေါင်းမှုဖြင့် ဂြိုလ်တုမှ ဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်း၊ မြေပြင်ကွင်း ဆင်းခြင်း နှင့် လျှပ်တပြက်အကဲဖြတ်တိုင်းတာခြင်း များပြုလုပ် ခဲ့ကြောင်း ယနေ့ ထုတ် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများတွင် ဖေါ်ပြထား သည်။
ယင်း တိုင်းတာချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ခုနှစ်အတွင်း ဘိန်းစိုက်ဧရိယာ ၄၀၈၇၈ ဟက်တာရှိ သည့် အနက် ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ၃၉၆၁၆ ဟက်တာအထိ လျော့ကျသွားကြောင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်တွင် ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ ခုနှစ်က ထက် ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ခုနှစ်တွင် ၁၂၁၆ ဒသမ ၉၁ ဟက်တာ လျော့ကျခဲ့ရာ ၃. ၀၉ ရာခိုင်နှုန်း လျှော့ ကျသွားကြောင်း သိရသည်။
သို့ သော် ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတွင် ယခုနှစ်အတွင်း ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု ၄ ဒသမ ၂ ရာ ခိုင်နှုန်း တိုးပွားပြီး ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတွင် ၄. ၅၄ ရာခိုင်နှုန်း၊ အရှေ့ ပိုင်းတွင် ၇ ဒသမ ၄၆ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းကြောင်း အဆိုပါ သတင်း က ဆိုသည်။
ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ တပြည်လုံး ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း ရှိကြောင်း၊ သို့သော် ချင်းပြည်နယ်၏ တိုင်းတာချက် အခြေအနေကိုမူ ယင်းသ တင်းစာ က ဖေါ်ပြခြင်းမရှိပေ။
ချင်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း တွန်းဇံမြို့ နယ်၊ ကျီခါးမြို့ နယ်ခွဲအတွင်းရှိ ဘိန်းခင်း ၆၇၂ ဒသမ ၈၆ ဧကကို ဖလမ်း ခရိုင်ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ များ၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ၂၀၁၃ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ မှ ၂၄ ရက်နေ့ အတွင်း ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အဆင်းရဲဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်သည့် ချင်းပြည်နယ်တွင် ဘိန်းစိုက် ဧက ထောင်နှင့် ချီရှိ သည်ဟု ဖေါ်ပြကြသော်လည်း UNODC ခေါ် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ရာဇ၀တ် မှု နှိမ်နှင်းရေးအဖွဲ့ က ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာတွင် ချင်းပြည်နယ်၌ ၁၀ ဟက်တာ (၂၄ ဧက) သာ ဘိန်းစိုက် ကြောင်း ခန့်မှန်းဖော်ပြခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် မူးယစ်ဆေးဝါးကင်းစင်ပပျောက်ရေးစီမံကိန်းအား ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှစ၍ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ထိ ၁၅ နှစ်စီမံကိန်းချထားပြီး၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ကင်းစင်ပပျောက်ရေး စီမံဒေသသည် ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကယားပြည် နယ်၊ ချင်းပြည်နယ် နှင့် ကချင်ပြည်နယ်တို့ဖြစ် သည်။